Xurmo Daran Safaaradeena Ku Taal Dalka Ethiopia . W/Q: Sharmarke Cabdi Ibraahim ( Dhuux ) | Somaliland Today
← Talo:-Shaqodoon ma tahay, shaqaale ma tahay , loo shaqeeyana ma tahay Q3aad :-W/Q: Farhan Mohamed Sultan Nur (Rakad)
Gambia Oo Maanta Doorasho Ka Dhacayso. →
Xurmo Daran Safaaradeena Ku Taal Dalka Ethiopia . W/Q: Sharmarke Cabdi Ibraahim ( Dhuux )
Aan salaamo bulsho weynta Somaliland, marka labaad aan salaamo bahda saxaafada , mar saddexaad aan salaamo intii magacayga iyo muuqaygaba taqaan. Salaam ka bacdi.
Waxaan jeclaystay inaan maqaal ka kooban ka idhaahdo safaaradeena ku taal dalweynaha Ethiopia, safaarada aynu ku leenahay dalka Ethiopia waa safaarada ugu basar ka xun uguna ayaan ka daran safaaradaha aynu ku leenahay dunida, waxay noqotay safaarada ugu fashilka iyo guul darada badan, waxaad la yaabaysaa sida qaabka daran ee shaqadii safaaradu u sii xumaanayso. Is dhexyaaca meesha yaalla markaad aragto ayaad yaabaysaa oo fajacaysaa. Waxyaabaha yaabka igu abuuray waxa ka mid ah saddex todobaad ka hor waxaa dalkan soo booqday wefti balaadhan oo uu hogaaminayo madaxweynaha Somaliland.
Weftigii waxa ay degeen SHARATON HOTEL oo ku yaal magaalada addis ababa ee caasimada dalka Ethiopia. Hab maamulka iyo habaynta dadka soo booqanaaya weftiga madaxweynaha waxa masuul ka ah safaarada Somaliland ku leedahay dalka Ethiopia. Dadka Somaliland ee dalkan ku nooli waxay u qaybsamaan dhawr qaybood oo kala duwan, qayb arday ah oo dalkan wax ka barata, qayb dhoof u joogta iyo qayb ganacsi u joogta, intaas qaybood oo kala socotaa haddii ay kolba weftiga u tagto waxaa meesha ka baxaya hab maamuuskii iyo sharaftii weftiga. Waxay sharaf dhac ku tahay safaarada Somaliland ee dalka Ethiopia ku taal.
Dadkii oo is dhexyaacaya ayaa weftigii afka iskaga shubay, ardaydii markay waayeen cid metesha waxay dantu ku qasabtay inay gaar gaar intay isku abaabulaan inay weftigii soo booqdaan, waxay dantu ku qasabtay inay ciddii ay heli karayeen inay soo booqdaan, safaaradii ardayda masuulka ka ahayd meeshii wey ka baxday, ardaydii tirada badnayd ee dalkan ku sugnayd safaaradeenii waxa ay ka door biday arday kooban oo safaaradu samaysatay oo ay danaheeda ku fushato. Arday ku shaqaysa danaha safiirka oo aan dantooda sheegan Karin ayey safaaradii samaysatay, sharaftii ardaynimo ayey taasi dhaawac weyn u geysanaysaa, ardaydaas dhuuni qaatayaasha noqday waxay meel ka dhac ku noqonayaan guud ahaan ardaydeena dalkan wax ka barata.
Basar daradaasi waxay meesha ka saaraysaa qiimigii loo qabay safaaradeena, waxay dhaawacaysaa kalsoonidii loo hayey safaaradeena oo markii hore ba lugo adag aan ku taagnayn, waxa is weydiin mudan masuuliyiinta safaaradu miyaanay fahamsanayn hababka ay u shaqeeyaan safaaradaha dhigooda ahi?. Waxa is weydiin mudan safaaradeenu miyaanay lahayn qayb u qaabilsan hab maamuuska madaxda soo booqanaysa safaarada?. Su,aalahaas hala weydiiyo masuulka safaaradeena maamula. Ceebooyin aan xad lahayn iyo sharaf dhac ayaa meesha ka muuqatay, suuqyada magaalada ayaad ku arkaysay ardaydii oo baabuur kiraysanaysa oo u kala dheeraynaya hotelkii weftiga madaxweynuhu degenaa, dadkii kale ee aan ardayda ahayn ayaa timahaagaas ka badnaa oo iyaguna is barbar yaacayey, kolkaad su,aasho meesha ay ku socdaan waxaa laguu sheegayaa inay ku socdaan weftiga madaxweynaha. Dadkaas ku dhex arki maysid qof keliya oo balan looga soo qabtay weftiga, qofkastaa isagaa iskii u socday.
Shaqadeeda ayey ahayd safaarada inay cidd kasta oo weftiga u socota ay siiyaan balan ay kula kulmaan, shaqadeeda ayey ahayd inay ciddii danta ardayda wadda inay la kulansiiso weftiga madaxweynaha balse taas safaaradeenu waxay ka doorbiday kooxdii dhuuni qaatayaasha ahayd ee iyada u adeegayey. Waxaad dareemaysaa safaaradeenu inaanay lahayn cid u qaabilsan hab maamuuska loo qaabilo cidd kasta oo soo booqanaysa safaaradeena ayaan daran, waxaad arkaysaa inay shaqadii safaaradu isku dhexyaacsan tahay, waxa meesha ka maqan ciddii isku xidhaysay bulshada reer Somaliland ee halkan ku nool iyo safaaradeena.
Ayaan darada iyo maarayn la,aanta safaaradeena haysata waxay qiimo tirtay oo ay habaas ka ku dartay sharaftii iyo aaminaadii laga sugayey safaarada. Waxaa is weydiin mudan maxaa sababay inay safaaradeenu sidaas u hagaasto?, maamul xumada iyo maarayn la,aanta masuuliyiinta safaarada ayaa sabab u ah inay sidaas u shaqayso safaaradu, waa maxay ceebta ka xun in dadkii koobnaa ee dalkan ku noolaa ay sidaas isku barbar yaacaan tiiyoo si fudud loo maarayn karayey. Miyaanay masuuliyiinta safaaradu talada la siiyo wax ku qaadanin tolow mise cidd la talisaba ma haystaan?, miyaanay ceeb ku ahayn masuuliyiinta safaarada iyaga oo awoodi karaya inay haddana kulansiin kari waayeen ugu yaraan wasiirka tacliinta iyo ardayda ?, lama arag ardaydaas baaxadaas leh ee dalkan wax ka barata oo masuul wasaraadeed la kulmaysa, wasiirka tacliintu marar badan ayuu dalkan soo booqday, mar keliya may dhicin in wasiirkaas iyo ardayda la kulansiiyo si loo ogaado baahiyaadka nololeed iyo waxbarasheed ee haysta ardayda Somaliland.
Sharaf daro ka weyn ma aqaan in safaaradii bulshada ka masuul ka ahayd ay sidaas ugu adeegto ciddii ay masuul ka ahayd, ceeb ka weyn ma jirto in masuulkii safaarada ugu sareeyey sidaas u kala dhoweysto ardaydii uu matelayey, cidd isaga u shaqaysa haddii uu doonayo muxuu dad ardayda ka madax banaan u shaqaalaysiin waayey? Muxuu ardayda u adeegsanayaa ? mise tolo habkaas aan ahayn oo u furan ayaan jirin?
Gunaanadkii waxaan ku soo afmeerayaa, dhawr qodob oo aan isleeyahay dhibkaas waa lagu joojin karaa.
1: waa in masuulka safaarada ugu sareeyaa ka madax banaanadaa rabitaanka ardayda kolka ay dooranayaan cidd iyaga metesha, haddii kale meesha waxaa ka baxaysa rabitaankii ardayda.
2: waa in safaaradu ilaalisaa mas,uuliyiinta wadankii ka imanaysa, oo ay xurmaysaa sharafta weftiga, cidkastaana aanay u ogolaan inay si fudud ugu tagaan iyaga oo is bar bar yaacaya.
3: waa inay samaysataa qof u qaabilsan baratakoolka safaarada.
4: waa in la sameeyaa guddi ardayeed oo lagu kalsoon yahay oo lagu soo xushaa kartidooda iyo aqoontooda, haddiise dano gaar ahaaneed iyo dano qabyaaladeed guddida ardayda lagu soo xulo sida hadda dhacday waxa meesha ka baxaysa kalsoonidii iyo sharaftii ardayeed, safaaradana waxaa laga qaadayaa sakati.
5: waa in safaaradu soo ceshataa kalsoonidii ardayda, maxaa yeelay wakhtigan la joogo arki maysid ruux u dhashay Somaliland oo dalkan jooga oo safaaradeena kalsooni u haya marka laga reebo koox danaystayaal ah oo isku magacawday guddida ardayda balse masuulka safaarada u sareeya u adeegta.
Talooyinkaas koob kooban waxaan u arkaa inay yihiin qayb aad u fudud, balse wax aad u weyn lagu sixi karo haddii la sameeyo. Waxaan qabaa haddi intaas la sameeyo inay wax badan iska bedeli karaan haykalkii safaaradu, isla markaasna ay soo celin karto kalsoonidii loo qabay safaarada oo hadda meesha ka sii baxaysa. Haddii qodobadaas la sameeyo waxaan qabaa inay meesha ka baxayaan cidkasta oo danaysi ku jiro oo magac ardayeed ku qadhaaban jirtay.
W/Q: Sharmarke Cabdi Ibraahim ( Dhuux ).